I-Sony Ericsson Xperia Active, i-smartphone engenamanzi ene-Android 2.3 Isonka se-ginger | I-Androidsis
Inkampani yakwaSony Ericsson iyaqhubeka nokubheja kwilayini yayo yeXperia kwaye, kunjalo, kwinkqubo yokusebenza yeselfowuni ye-Android. Izolo besikuxelele ukuba inkampani icwangcisa ukumiliselwa kweXperia Duo, i-smartphone yayo yokuqala eneprosesa engumbini. Namhlanje siza kuthetha ngesinye isiphelo esitsha seSony Ericsson, i-Xperia Active.
Ngenjongo yokubonelela ngokudibanisa kubasebenzisi, kwintengiso egcwele iifowuni ze-Android, u-Sony Ericsson uza kuphehlelela i-Xperia Active, iselfowuni engenamanzi. Uyilo lwebar esebenzayo yeXperia lincediswa luhlobo lomjelo obekwe emazantsi efowuni esetyenziselwa ukubopha intambo efakwe kwikhabhathi yayo.
I-Sony Ericsson Xperia Active iza neprosesa ye-1 GHz kunye ne-Android 2.3 Isonka se-Gingerbread, ine-3-intshi ubukhulu bescreen kunye nesisombululo sepikseli esingu-320 x 480. Ikwanazo neekhamera ezimbini ezidityanisiweyo, isisombululo esingasemva se-5 megapixel esikwaziyo ukurekhoda iividiyo kwi-720p, kunye nomphambili ngesisombululo seVGA). Imemori yangaphakathi yi-320MB, kodwa iza nekhadi le-2GB le-microSD kwaye ixhasa ukuya kuthi ga kwi-32GB.
Ngokumalunga nokunxibelelana kwayo, i-Sony Ericsson Xperia Active ye-smartphone ine-GPS, iWi-Fi, iBluetooth kunye ne-DLNA.
Akukaziwa ukuba indleko zayo ziya kuba yintoni okanye umhla wokuqaliswa kwayo, kodwa kuqikelelwa ukuba iyakufikelela kwintengiso kwikota yesithathu yalo nyaka ka-2011.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » I-Sony Ericsson Xperia Active, i-smartphone engenamanzi ene-Android 2.3 Isonka sejinja
Ndinomdla kakhulu, kodwa ndikhetha iDefy yam, kuba inescreen esikhudlwana sokudlala kakhulu kweminye imidlalo, ndiyayithanda iMOTOBLUR kakhulu, kwaye inyani kukuba andiwuthandi umgca weXERIA, nangona ulungile kakhulu ukuba urekhoda iividiyo ngo-720p.
Eyona nto inomdla ngale fowuni kukuba ayinamanzi. yonke enye into ingunyaka omnye emva kwexesha kwizixhobo.
Ungayichazanga eyokuba andisithandi isikhombisi sony kwaphela.
ALIS kwezinye iilwimi sitsho
inomdla ukuba ayinamanzi, ke ukuba iwela echibini, ndiyayikhupha ndiqhubeke
uyasebenza? Ewe, kuphela kwento enomtsalane, yonke enye into uyinikwa iblackberry
Bavelisa isoftware yokuqhuba usetyenziso lwe-Android kwi-MeeGo